Modeling နည်းလမ်းကို သိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်များတွင် ရှေးယခင်တည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သိပ္ပံနယ်ပယ်သစ်များဖြစ်သော design engineering, construction ၊ ဗိသုကာ၊ နက္ခဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ နှင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ လူမှုရေး သိပ္ပံ ဘာသာထိပါ modeling ကို ကျယ်ပျံ့စွာသုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။ ၂၀ ရာစုမှာတော့ ခေတ်သစ် သိပ္ပံနယ်ပယ်အားလုံး၏ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူ modeling method သည် အောင်မြင်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ သို့သော်လဲ အချိန်အတော်ကြာထိ Modeling Methodology သည် သီခြား သိပ္ပံ တစ်ခုအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်ထားသော စနစ် အယူအဆ၊ တညီတညွတ်တည်း သုံစွဲသော ဝေါဟာရမျိုး မရှိခဲ့ပါ။ တဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးရင်းဖြင့်သာ Modeling အခန်းကဏ္ဍသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ(a method of scientific cognition) သိပ္ပံကိုစူးစမ်းသိမြင်ခြင်း နည်းလမ်းတရပ် ဖြစ်လာပါတော့သည်။
Modeling - အခြေခံသဘောတရား[ပြင်ဆင်ရန်]
ရံဖန်ရံခါ ကျွန်တော်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တကယ့်အရာဝတ္ထုများကို လေ့လာစူးစမ်းရန် ခက်ခဲခြင်း မဖြစ်နိုင်ခြင်းမျိုး ကြုံရတက်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ အမျိုးအစားထွေပြားမှု၊ ရှုပ်ထွေးစွာ ဖွဲ့စည်းထားမှု စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ၎င်းတို့အား လေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ မော်ဒယ် တည်ဆောက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ပိုမိုရိုးရှင်းစွာနားလည်းနိုင်စေရန် တကယ့်အရှိတရားကို ထင်ဟပ်စေမည့် အဓိက စရိုက်လက္ခဏာ အချို့ကိုသာ မော်ဒယ်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ချဉ်းကပ်လေ့လာနည်း၏ အသုံးဝင် ထိရောက်မှု ကို ရာစုလိုက်ချီ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော သိပ္ပံ မှ သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် Model များသည် အမျိုးမျိုးသော စက်ကိရိယာများ၊ စက်ယန္ထရားများ၊ အဆောက်ဦးများ၊ လျှပ်စစ် ဆားကစ်ဘုတ်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းတို့တွင် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေကြသည်။ အဘယ့်ကြောင်ဆိုသော ကြိုတင်ပုံကြမ်း (sketch) ရေးဆွဲထားခြင်းမရှိဘဲ သာမန်ရိုးရှင်းသော စက်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုတောင် ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါ။ ရှုပ်ထွေးသော အလုပ်လုပ်ပုံ (complex mechanism) များကို ဆိုလျှင်ဖြင့်မူ ဆိုဘွယ်မရှိပါ။
Modeling ဆိုသည်မှာ မော်ဒယ် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို လေ့လာစမ်းစစ်ခြင်းအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်လောကကို စူစမ်းသိမြင်ခြင်း နည်းလမ်း တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးသည် အရာဝတ္ထုများ၊ ဖြစ်စဉ်များ အပေါ်ကို ရှု့ထောင့်မျိုးစုံမှ သုတေသနပြုပြီး မတူညီသော မော်ဒယ် အမျိုးအစားများကို တည်ဆောက်လေ့လာကြသည်။ ရူပဗေဒ တွင် အရာဝတ္ထုများ၏ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုနှင့် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာသည်။ ဓာတုဗေဒမှာတော့ ၎င်းတို့၏ ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကို လေ့လာသည်။ ဇီဝဗေဒမှာဆိုလျှင် သက်ရှိ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် အမူအကျင့်များကို လေ့လာကြသည်။
မော်ဒယ် ဆိုသည်မှာ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အရာတစ်ခု ၎င်းသည် လေ့လာစူစမ်းလိုသော ဖြစ်စဉ်/ဖြစ်ရပ်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၏ ပဓာနကျသည့် လက္ခာများကို ထင်ဟပ်စေသည်။ တနည်းအားဖြင့် မူလအရာဝတ္ထု၏ အစားထိုးပုံစံဖြစ်ပြီး မူလနှင့်စဉ်တူသည် သို့သော် ပိုပြီးရိုးရှင်းသော အသွင်ဖြင့် မူလအရာဝတ္ထုကို ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထု တစ်ခုတည်းကို မော်ဒယ် အမြောက်အမြားဖြင့် ကိုယ်စားပြုဖော်ပြနိုင်သကဲ့သို့ အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကိုလည်း မော်ဒယ် တစ်ခုတည်းဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ ကျွှန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးသည် သောင်းပြောင်းထွေလာသော အရာဝတ္ထုများဖြင့် ပြည့်နက်နေသည်။ ၎င်းအရာများဖြင့် ထိတွေ့ဆက်နွှယ်ကြသည့်အခါ ရှုပ်ထွေးသောအရာဝတ္ထု (complex object)၊ ရိုးရှင်းသော အရာဝတ္ထု(simple object) စသည့် သဘောတရားအယူအဆများကို နားလည်ရန် လိုအပ်လာသည်။ ရှုပ်ထွေးသောအရာများသည် ရိုးရှင်းသောအရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြသည်။ ဥပမာ - အုတ်ခဲ သည် ရိုးရှင်းသောအရာဝတ္ထု သို့သော် အဆောက်အဦးသည် ရှုပ်ထွေးသောအရာဝတ္ထု ဖြစ်သည်၊ ကိုယ်ထည်၊ လက်ကိုင်၊ ဘီး စတာတွေသည် ရိုးရှင်းပြီး စက်ဘီး သည် ရှုပ်ထွေးသောအရာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အရာဝတ္ထုတိုင်းသည် အခြားအရာဝတ္ထုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့် စနစ် ဆိုသည်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။
စနစ် ဆိုသည်မှာ ရှုပ်ထွေးသော အရာဝတ္ထုဖြစ်ပြီး အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ(elements)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စနစ် တိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ တိကျသော ရည်ရွယ်ချက်(goal) အသီးသီးရှိကြသည်။ စနစ် တိုင်းကို ၎င်းတို့အား ဖွဲ့စည်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အစုအဝေးအားဖြင့်သာမက ထိုအစိတ်အပိုင်းများအား တစ်ခုတည်းသော အရာဝတ္ထုဖြစ်သွားစေရန် ချိတ်ဆက်ပေးသည့်နည်းလမ်းများ အစီအစဉ်များအားဖြင့်လည်း သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စနစ်တိုင်းကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (structure) အားဖြင့် သတ်မှတ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ စနစ် ဥပမာများမှာ - အိမ်၊ ကား၊ လူ၊ ကွန်ပျူတာ၊ စက်ဘီး၊ တီဗွီ အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုသည်မှာ စနစ် တစ်ခုအား ဖွဲ့စည်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများ အချင်းချင်းကြားမှ ဆက်သွယ်မှု အစုအဝေး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း ဆက်သွယ်မှုပုံစံ(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ)သည် စနစ် ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားကြသည်။
မော်ဒယ် အုပ်စုများ(Classifications of Model)[ပြင်ဆင်ရန်]
Modeling asamethod of scientific cognition Archived 27 November 2016 at the Wayback Machine.
Conceptual models of computer science Archived 17 May 2018 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Modeling&oldid=737523" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၇:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။